अर्जुनधारा नगरपालिकामा सलह किन्न पाँच लाख बजेट - Khula Patra
अर्जुनधारा नगरपालिकामा सलह किन्न पाँच लाख बजेट
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ २७, २०७७
प्रकाशित समय: ७:५६:१५
झापा । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले सलह किरा खरिदका लागि रु पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सलहबाट कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि नगरले उक्त बजेट विनियोजन गरेको नगरप्रमुख हरिकुमार रानाले जानकारी दिए ।
कोरोना भाइरससँग नगर पौँठेजोरी खेलिरहेका बेला स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएर हौसला प्रदान गर्नुभएकोमा नगरप्रमुख रानाले धन्यवाद व्यक्त गरे ।
बिहीबार थप पाँच जनाको मृत्यु, नेपालमा कोरोनाले अहिलेसम्म मर्ने को-को ?
काठमाडौं उपत्यकामा ८७ सहित ३६० जना कोरोना संक्रमित थपिए
कुन कलेज पढ्ने भनेर अन्योल हुनुहुन्छ ? घरै बसेर छान्नुहोस् कलेज
इलामको सूर्योदय नगरपालिका लकडाउन